Mogadishu Journal » Boosaaso: Booliska Puntland oo soo bandhigay rag loo sii xiray dilka nin ganacsade ah
Mjournal -Saraakiisha booliska Puntland ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay afar nin oo dhallinyaro ah oo ku eedeysan dilka nin ganacsade ah oo 11 bishan Febaraayo xilli habeen ah lagu dilay magaalada Boosaaso.
Taliyaha ciidanka booliska Puntland Jen. Muxiyadiin Axmed Muuse , ayaa hay’adaha amniga ku ammaanay soo qabashada raggan ku eedeysan dilka ganacsahada, wuxuu inta ku daray in sharciga la marsiin doonno.
“4ta nin labo ka mid ah ayaa isku tuur tuuraya dilka ganacsadaha,balse baaritaanka ayaa lagu kala saari doona”. ayuu yiri Jen Muxiyadiin.
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho